Macallin Jose Mourinho oo Cristiano Ronaldo ku eedeeyey guuldarradii xalay ka soo gaartay kooxda Real Madrid | Garqaad News Agency
Macallin Jose Mourinho oo Cristiano Ronaldo ku eedeeyey guuldarradii xalay ka soo gaartay kooxda Real Madrid
Aug 9, 2017 - Comments off
Macallinka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Jose Mourinho ayaa guuldarradii ka soo gaartay kooxdiisa xalay naadiga Real Madrid waxa uu ku eedeeyey Cristiano Ronaldo iyo garsoorka ciyaarta.
Real Madrid ayaa xalay 2-1 kaga adkaatay Manchester United, sidaasna ku qaaday UEFA Super Cup, laakiin Jose Mourinho waxa uu aaminsan yahay in Cristiano Ronaldo iyo garsoorkuba ay qeyb weyn ku lahaayeen guuldarradaas soo gaartay Man United.
Ronaldo ayaa kursiga keydka ka soo istaagay markii ay ciyaartu ka harsaneyd 7-daqiiqo oo qura, laakiin Mourinho wuxuu qabaa in garsooraha ciyaarta uuba daqiiqadahaasi yar oo ay kooxdiisa Man United barbaraha raadinaysay uu ku dhammeeyay qaladaad uu u dhigayay CR7.
“Waqti dheeri ah ayaa la aadi lahaa, maxaa yeelay kulanku waxa uu noqon lahaa barbaro 1-1 haddii la heli lahaa muuqaal caawiyaha garsooreyaasha oo fiican, waxaan aaminsanahay inay dhalin kareen goolal ka badan intey dhaliyeen, innaguna waxaan dhalin karnay in ka badan intaan dhalinay.” ayuu yiri Jose Mourinho oo ka biyo diidsan goolkii garab dhaafka u muuqday (Offside) ee Casemiro.
“Intaa kaddib Cristiano Ronaldo ayaa soo galay ciyaarta, garsoorahana wuxuu doonay inuu xushmad u muujiyo ciyaaryahanka cajiibka ah, markasta oo uu Ronaldo doono garsooraha seeriga ayuu yeerinayay si uu ugu dhigo laad xor ah (Free Kick) kulankana waa la joojinayay, laakiin dagaal fiican ayaan siinay.”